Wasiir Caadle oo ka hadlay dhabaha loo marayo Dhismaha Hirshabelle | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Caadle oo ka hadlay dhabaha loo marayo Dhismaha Hirshabelle
Wasiir Caadle oo ka hadlay dhabaha loo marayo Dhismaha Hirshabelle
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle, Maxamed Cali Caadle ayaa ka hadlay Dhismaha Maamulka Hirshabelle, sida loo wajahayo, haddii caqabado horgudban yihiin iyo haddii kalaba.
Wasiirka oo la hadlay VOA ayaa tilmaamay in marka ugu horeyso la isugu yeeri doono Odayaasha Dhaqanka, lana dhageysto afkaaraha ay qabaan, iyagana ay la wadaagi doonaan sida ay wax u rabaan.
“Waxaan rabnaa inaan idin sheegno marka ugu horeyso wuxuu ka bilaan doonnaa, haddii Ilaahay ka raali noqdo habraacu in loo yeero dhaqanka, meelkastoo uu jooggo lala hadlo, geed walba iyo goob walba loogu taggo, lana dhageysto afkaarta ay qabaan, anaguna waxa aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno, inaan niraahno qaabkaan iyo qaabkaanaa rabnaa, war idinkuna taladiina wixii ah noo sheega.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Odayaasha Dhaqanka hoggaamin doonaan Dhismaha Maamulka Hirshabelle, kolka gogosha la isugu keeno, isla-markaana ay go’aan ka gaari doonaan wixii tallaabo ah, ee ay tahay in la qaado.
“Dhaqanku markii ay isu taggaan oo aan gogosha guud isugu gayno ayaga ayaa hoggaamin doono markaas, sida uu noqonayo qaab dhismeedku. Haddii ay noqon laheyd dib-u-heshiin loo baahan yahay, haddii ay jiraan waxyaabo caqabado ah oo hortaagan, ayaga ayaa laga rabaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay horkacaan.” Ayuu yiri Wasiir Caadle.
Wasiir Caadle ayaa dhanka kale meesha ka saaray in Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare uu diidan yahay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo, sidoo kalana uu Madaxweyne Kuxigeenka, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) uu doonayo in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Previous articleGudoomiyaha B/hirshabelle: Wadahadalka weli waa uu furanyahay
Next articleWadooyinka Magaalada Muqdisho oo saaka qaarkood xiran